10 Events Most Special In The Netherlands | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Events Most Special In The Netherlands
Kana chete vakatamira kuNetherlands kana vari kufunga achisvetukasvetuka muchitima kuti kushanya kwemazuva mashomanana, muri pamwe kushamisika izvo 10 Events Most Special In The Netherlands vari. Iwe vachafadzwa kuziva pane zvakawanda kutarisira, zvisinei nguva ipi yegore yaunosishanyira.
Uyewo paakaita Pop Mitambo, pane akasiyana Special zviitiko muNetherlands kuti murege kuwana kumwe: mhemberero chokuita Dutch umambo, mahwindimiri, uye tulips. Zviitiko izvi zvose tarenda nzira ufare uye kuti Kunyudzwa chiDutch nzira yokuita zvinhu!
Uyu ndiwo mumwe wevaya pazviitiko muNetherlands kuti hakusi kuziya mwoyo! Kana uchida kutanga gore yakachena, tora chilli svetuka wakatorwa pana New Years Day (Goredzva). Mutambo uyu yeDutch chakatangwa nevanhu netsvimbo dzinoshambira mu 1960. Pane 209 svetuka enzvimbo muNetherlands unogona kutora svetuka. kunyange zvazvo, Diving kupinda North Sea pa Scheveningen, The Hague, ndiyo inonyanya kufarirwa nzvimbo pamwe kusvikira 60,000 vanhu. pashure, sekubvunda vanoshambira dzinoturwa aine mukombe erwtensoep, rudo meaty pizi muto.
Ko munoziva kuti Netherlands ane mumwe makurusa Chinese munzanga Europe? Tinofunga kuti tinenge tichishandira zviripo ruvara pamusoro yedu 10 pazviitiko Most muNetherlands! Ivo runonyanya kurarama muAmsterdam, reRotterdam, uye Hague, umo pane zvakawanda zviitiko kupemberera Chinese New Year. muAmsterdam, musoro Dam Square uye Nieuwmarkt / Zeedijk kuona zibukanana vaipemberera, shumba vachitamba, uye mafayawekisi. Unogonawo kupinda chaidzo mabasa muna De Bijenkorf dhipatimendi chitoro, kusanganisira calligraphy okudhindira, mumhanzi zvesimba, nemitambo yetii, kana ari temberi wechiBuddha Fo Guang Shan He Hua.
Zuva zvakare pamusoro chikafu, uye muAmsterdam, unogona kudya zvokudya zvinonaka kumisika mumugwagwa, paGungwa Palace (Europes kutanga zvinoyangarara Chinese resitorendi), kana pane imwe zhinji Chinese restaurants achitevedza Stormsteeg uye Geldersekade. Muna Hague, muchawana mitambo Chinese ari atrium kweguta horo uye Den Haags Chinatown kumativi Wagenstraat. Unogona kuwana zviitiko reRotterdam anotangira Chinese New Year, zvikamu kure zuva mhemberero kunhivi Chinese wijkpark Old West uye Westkruiskade Chinatown. Kana iwe uri mashura, pamusoro Chinese New Year Evha kudya mbishi hove Salad (Yu Sheng) kuunza zvakanaka mhanza kana fai Hai, rudzi matope, nokuti kubudirira. Gong Xi Fa cai! (Goredzva Rakanaka!)
Events Special In The Netherlands 3: Keukenhof (March To May)
The Keukenhof ndiyo arguably yakakurumbira munda muNetherlands. Kutarisa mune tishamiswe mamiriyoni Multi mavara tulips vachiita iyi yakanaka chiDutch paka kubva mukupera March mid May. The Keukenhof, zvinoreva kuti mumunda kicheni, kwave kumativi kubvira muzana remakore rechi15 uye rinotaura whopping 32 hectares. mazuva ano, ari Keukenhof anogamuchira 800.000 vashanyi gore negore.
Mumwe Zvimwe 2018 dingindira yaiva yakakura ruva girobhu racho wezvidimbu, kufukidza imwe nzvimbo 250m2 uye zvinosanganisira 50.000 tulips, vatanhi hyacinths, uye crocuses. Chii chichava chinotevera shanduro kunotoreva?
Kana Special Events muNetherlands kunosanganisira akasununguka chikafu, mungandizivisa kuverenga muna! pa 50% kure, zviri kushanda ari kuba! Shanyira Dutch ichi mutambo foodies, apo unogona adye mune mamwe pamusoro maresitorendi muNetherlands kuti anopenga discounts.
Mazana pokuita maresitorendi zvakawanda Dutch maguta kupa vanoshamiswa matatu kosi kudya kwemanheru Muterere kuti nhamba chaidzo 28,50 euros. Michelin starred mumaresitorendi akamurairawo dzimwe muripo, uye maresitorendi akanyorwa pamusoro 250 dzinodawo chiduku chinamatidzwa. Ungave uri Foodie ane bhajeti shoma kana kungoti kuziva kuedza dzimwe akasiyana wakanaka dzokudyira nzira pasina kuisa yakawandisa buri chikwama chako, uchabva rudo Restaurant Week. Ichi chipo chinokosha kuchiitika kaviri pagore muNetherlands.
Kuti zvive nyore kuti bhuku tafura, musangano iri chiitiko vakaita mazita 500 mumaresitorendi pokuita, por guta, pa Restaurant Week Website.
5: Kings Day (Kubvumbi 27)
Chimwe chezvinhu pazviitiko muNetherlands, kana asiri mumwe kupfuura kunonakidza uye ita mhirizhonga, iri On Kings Day, which iri King Willem YaAlexander bhavhdhe. Dutch maguta naHama mumigwagwa mapato, misika nhata, uye mabasa, akashandura yose Netherlands kupinda zvikuru mutambo gore. Unogona zvechokwadi kuwedzera ichi mumwe kupfuura pazviitiko muNetherlands! Vanhu vanoenda kunze kupemberera, kuridza mumhanzi, vapfeke orange uye vane-kumativi ose zvakanaka, kana asina runobva, nguva. Kings Night rinopembererwa usiku asati Kings Day, nemapato emusango mu maguta anokwezva mapoka kubva mamaira akatenderedza.
Events Special In The Netherlands 6: ruva
Wakamboona here iyo mita-mapfumbamwe yakareba ichiyangarara, akafukidza maruva uye Gliding mumigwagwa, dzinofambiswa nechinhu asi manpower? tsime, iwe uri kuda! ruva Zundert iri kupfuura ruva achimisa munyika zvachose kwakaitwa vazvipira. Gore negore, mumwe nomumwe Hamlet anoedza kuvaka ichiyangarara runonakidza hazvina nokusingaperi akavaka. Shanyira ichi chiitiko chinokosha zvikuru muna Zundert sezvo uchange kukurirwa. Corso Zundert ndiye zvose pamusoro kuona uye, pakuti, vanotenda!
Events Special In The Netherlands 7: Relief pamusoro weLeiden (Relief Of weLeiden)
The 10 pazviitiko Most muNetherlands vaifanira kusanganisira tsika, ehe saizvozvo. Zvinoitirwawo weLeiden ndomumwe wavo! It wokurangarira Spanish kukombwa kwaizotevera zororo veguta 1574. WeLeiden anova mumwe mutambo mukuru kwemazuva maviri panhurikidzwa. Nakidzwa kwakawanda, mafaro zvakanaka, musika, Concerts, mapato, mafayawekisi, uye tsika ndiro.
Kunyangwe paine mafaro uye akawanda mapato, Leidens Ontzet iri mhemberero netsika vakawanda nhoroondo zvirevo. The mangwanani vatatu October rinotanga pamwe reveille panguva guta horo. Free herring uye chingwa chena vari ipapo kupiwa kubva panguva weLeiden Waag. Unogona kuva noukama chiridzwa kuungana munzvimbo Van Der Werf paki uye basa iri Pieterskerk. Manheru vanhu dzinozivikanwa kudya twakadai uye hanyanisi nyemba rinonzi Hutspot. The Kupemberera kugumira mukuru firework anoratidza.
Events Special In The Netherlands 8: Maseiri Amsterdam
Maseiri dzinozivikanwa rinotanga pamwe paredhi: mazana engarava anofamba nechikepe achipinda muIJ uye anoita chimiro chakasarudzika chausingazombokanganwa. Mumazuva anotevera mazuva, mitambo yakawanda pamusoro mvura rini, kusanganisira Skutsjesilen(muchikepe pamwe randinenge Frisian chikepe). The Royal Netherlands Navy ndichakubvunzaiwo kuratidza unyanzvi hwavo pamusoro pemvura.
Next yose basa pamusoro pemvura, panewo zvakawanda zvokuita pamusoro wharves, izvo zvinoita kuti chinokosha. chirongwa seiri Anozvirumbidza varaidzo, unyanzvi, tsika nemagariro, mumhanzi, uye zvemitambo uye vana mabasa.
Maseiri Amsterdam anovimbisa anoyevedza uye isingaenzaniswi zvikepe wakareba, nechikepe nhaka ndege, zvikepe ano, zvikepe wengarava, uye isingadhuri yezvifananidzo.
Special campsites, inokwanisika musasa, uye musasa dzomusango zvinogoneka muNetherlands panguva Tenting Days (From tende rako). The kurongwa Tenting Days pamwe nevadiwa vakawanda. zvinoti; musasa Sites, Society nokuti Mahwendefa Natural Monuments muNetherlands, uyewo Forestry Commission. You vanopiwa mukana musasa zvikuru zvinonakidza, chipa, nenzvimbo dzesango dzeNoordoostpolder. Uyewo Super kunonakidza kuti vakuru nevana zvakafanana!
Parkpop nderimwe remasangano Pop zviitiko muNetherlands, wakaitwa gore negore musi wokupedzisira Svondo yaJune. Chii chinoita kuti chinokosha, ndechokuti vakasununguka chose!
A chiitiko dzose kubva 1981, Pop mutambo National ichi akaisa The Hague pamepu. Nemhaka vakasununguka mumhanzi nemitambo pamwero. Kwemakore akawanda, zvakanga kunyange kupfuura akasununguka Pop mumhanzi mutambo yose Europe! Unogona kutarisira pamusoro 350.000 vanhu pamutambo uyu anotyisa.
Kana uri kuuya nomumwe chikamu The Hague, ipfungwa huru kutenderera kusvikira vakatozodzokera pa Zuiderpark.
Tava vakatumidza 10 pazviitiko Most muNetherlands, asi kune vamwe vasingaverengeki. Get muchitima achibatsirwa Save A Train uzvionere!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Events Most Special In The Netherlands” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspecial-events-netherlands%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)